Niditra an-tanety tao Soalala i Belna: ahina ny tondradrano amin’ny faritra maro | NewsMada
Par Taratra sur 10/12/2019
Vokatry ny fidiran’ilay rivodoza Belna an-tanety, tao amin’ny distrikan’i Soalala, omaly tolakandro, mitohy mikija ny orana, tafakatra hatramin’ny 2 metatra ny haavon’ny rano… Ahiana noho izany ny tondradrano amin’ny faritra maro, indrindra any Morondava…
Niditra an-tanety tao cap Amparafaka, distrikan’i Soalala, omaly tolakandro tamin’ny 5 ora, ilay rivodoza Belna. Nijojo vao maraina ny orana niaraka amin’ny rivotra mafy. Efa niomana mialoha niaraka amin’ny tomponandraikitra samihafa any an-toerana ny mponina sy ny BNGRC ary ny Croix rouge malagasy. Nisy ny fanentanana ny mponina hanao tahiry, nizara vaovao tsy tapaka momba ny tsara ho fantatra koa izy ireo. Mafy ny rivotra nentiny satria nahatratra 130 km isan’ora ary mahatratra 180 km mihitsy ny tafiotra. Mirotsaka koa ny orana hatramin’ny omaly maraina ho an’ny distrika ao anatin’ny faritra Boeny, Mahajanga, rehetra sy ny faritra manodidina. Tapaka ny herinaratra tao an-tampon-tanànan’i Soalala tamin’ny 4 ora hariva vokatry ny rivo-mahery, omaly. Sahirana ny vahoaka satria tapaka ny fifandraisana ka tsy nahazo intsony vaovao.
Hiakatra ny rano
Nampitandrina koa ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa nahatratra 200 mm sahady ny rotsak’orana ka hiakatra ny haavon’ny renirano, indrindra ny ao Morondava. Hisy fiakarany ny reniranon’i Morondava ao anatatin’ny 24 ora ho avy. Ho tratra ny refy fanairana 2 m ao amin’ny mari-pandrefesana ny haavon’ny rano ao Antanambao izay ao an-tanànan’i Morondava. Mihatra, noho izany, ny fanairana loko mavo, milaza loza manambana ho an’i tanànan’i Morondava.
“Tombanana fa ho levona ety an-tanety ihany any amin’ny distrikan’i Morombe i Belna rahampitso”, hoy ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Raha ny vinavina, hamakivaky ny faritra Melaky sy ny tapany avaratry ny faritra Menabe i Belna anio rehefa tafiditra an-tanety.
Ho an’ny distrika maro toy an’i Maevatanàna, tsy nianatra ny mpianatra ary niato ny asa rehetra. Nampilazana koa ireo mpihady volamena fa tokony hitsahatra ny asa noho ny mety ho fihotsahan’ny tany vokatry ny orana mikija.
Nahazo filazana loza mitatao (loko mena) ny faritra Boeny iray manontolo, i Besalampy, i Morafenobe, Ambatomainty, i Maintirano, i Maevatanàna, i Kandreho.
Miloko mavo na loza manambana kosa i Bongolava, i Menabe, Antsalova, i Nosy Be, Ambanja, Analalava, Antsohihy, i Port Bergé, i Mampikony, i Tsaratanàna.
Foana kosa ny filazana ho an’ny distrikan’ Antsiranana I-II, Ambilobe, i Bealalana, i Befandriana Avaratra ary i Mandritsara.